Dr. Daw Wai Wai Lwin Zaw – Healthy Life Journal
Dr. Daw Wai Wai Lwin Zaw
ဒေါက်တာဒေါ်ဝေေ၀လွင်ဇော် (အထူးကုဆရာဝန်၊ အရိုး၊ အကြော၊ အဆစ်ဆေးကုဌာန၊ ခုတင်၅၀၀ဆံ့ဆေးရုံကြီး)
Posts By Dr. Daw Wai Wai Lwin Zaw
(၁) စိတ်ဖိစီးမှု များခြင်း။ (၂) စိုထိုင်းဆ မြင့်မားခြင်း။ (၃) လေထုညစ်ညမ်းခြင်း။ (၄) ၀က်ခြံအဖုအပိမ့်တွေကို လက်နဲ့ ညှစ်ခြင်း၊၊ လက်နဲ့ကုတ်ခြစ်ခြင်း။ (၅)စေးကပ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် (ဆီကြော်စာတွေကြော်တဲ့ မီးဖိုချောင်)။ (၆) အစိုဓာတ်ထိန်းခရင်မ်၊ မိတ်ကပ်၊ ဆံပင်ဖျန်းစပရေးစတာတွေ ပါဝင်တဲ့...
ဒေါက်တာဒေါ်ဝေေ၀လွင်ဇော်(အထူးကုဆရာဝန်၊ အရိုး၊ အကြော၊ အဆစ်ဆေးကုဌာန၊ ခုတင်၅၀၀ဆံ့ဆေးရုံကြီး)နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. လေးဖက်နာရောဂါအကြောင်း သိပါရစေဆရာမ။ ဖြေ. လေးဖက်နာလို့ ဘာကြောင့်ခေါ်သလဲဆိုတော့ လက်နှစ်ဖက်၊ ခြေနှစ်ဖက်နာလို့ လေးဖက်နာလို့ ပြောကြတာပါ။ လေးဖက်နာဆိုတဲ့ အခေါ်အဝေါ်က နည်းနည်းတော့ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ လူနာတစ်ဦး လေးဖက်နာပြီဆိုရင် ဟိုးတုန်းကတော့ ASO...